Imandarmedia.com.np: सीके राउत र महन्थ ठाकुरले गोप्य रुपमा पकाउदैछन यस्तो खिचडी..?
Main News, Political » सीके राउत र महन्थ ठाकुरले गोप्य रुपमा पकाउदैछन यस्तो खिचडी..?
सीके राउत र महन्थ ठाकुरले गोप्य रुपमा पकाउदैछन यस्तो खिचडी..?
सरकारसँग वार्तामा व्यस्त राजपाका शीर्ष नताहरूले अलगाववादी नेता सीके राउतसँग भेटी मधेसका मुद्दामा सहकार्यको सम्भावना खोजेका छन् ।
यसै साता राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राउतबीच केही सहयोगीसहित बैठक भएको र त्यसमा सहकार्यको सम्भावना खोजिएको पुष्टि दुवै पक्षले गरेका छन् ।
एक प्रश्नको उत्तरमा महतोले राजपा मात्र नभई फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदार, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा राजपा जन्मनुभन्दा अघि राजपासम्बद्ध ६ मधेसवादी दललाई समेत पद र पैसा त्यागी स्वतन्त्र भएर मधेसको मुद्दामा सहकार्य गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए। महतोले भने, ‘मधेसवादी दलले सत्ता र पैसाको मोहमा हामीलाई स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । उनीहरू राज्य लिएर देश लिने भन्छन्, हामी राज्य होइन, देश नै लिनुपर्छ भन्छौं ।' अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।